नेपालले पानी नदिने हो भने भारत प्याक प्याक भएर मर्छ : कीर्तिनिधि विष्ट
Wednesday, 11.15.2017, 02:02pm (GMT5.5)
० देश कतातिर जादैछ ?
जनता रोईकराई गरेर देश देश भनिरहेका छन्, सत्तामा बस्नेले सुनेको नसुन्यै ग¥या छ । जनताको मनमनमा यो खड्किरहेको छ कि देशले यस्तो एउटा ब्यक्ति पाओस जो संसारलाई यहिबाट देख्न सकोस् । आफ्नो नेतृत्व आत्मविस्वासी होस्, कर्मठ र धेरै टाढासम्म देख्न सक्ने होस् । नेपालको भविश्य उज्ज्वल बनाओस्, जनतालाई गरेर खाने बाटो फेला परोस् र नेतृत्वले देश हाँकिदेओस् । जनताको आकांक्षा यत्ति हो । जनताको अरु केही स्वार्थ छैन । अहिले देशमाथि हस्तक्षेप गरेर मुलुकको सार्वभौमिकता नै संकटमा पारिएको छ यसबाट बढी चिन्ता देख्छु म हरेक मान्छेहरुमा ।
अहिले जसले शासन गरिरहेका छन् यी नेतै होइनन् । यस्तो पनि नेतृत्व हुन्छ ? आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश देख्न सक्ने पो नेता । आफ्नो सानो स्वार्थ पूरा हुन्छ भने देशमाथि विदेशीको जस्तोसुकै हस्तक्षेप र निर्णायकत्व लाद्न तयार हुने पनि कहीँ नेता हो ? यो मैले मात्र भनेको कुरा होइन, जन जनले भनेको कुरा होे । जनताको कुरा सुनेर आत्माआलोचना गरुन्, पश्चाताप गरुन्, म यहि भन्न चाहान्छु । यिनीहरुको प्रयास सफल भयो भने यिनीहरु आफू मात्र होइन, यिनीहरुको पार्टी मात्र पनि होइन, सिंगै देश अरुको हुन्छ । देशमाथि अर्कैले आधिपत्य जमाउँछ । अझै पनि किन चेत नखुलेको ? म आश्चर्यमा परेको छु ।
कुन पार्टीको नाम लिउँ ? नेता कुन पार्टी भन्ने छैन । जुन पार्टीले गरे पनि जसले राम्रो गर्छ राम्रो भन्छु जसले खराव गर्छ खराव भन्छु । आज चाइनामा हेर्नुस्, त्यो पनि त कम्युनिस्ट देश हो । ल हेर्नुस् त चाइना कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? उसले जुन किसिमको सिस्टम डेभलप ग¥र्या त्यस्ले उसलाई विश्वमै एउटा सशक्त राष्ट्रको रुपमा उभ्याएको छ । यसरी चीन सवल भएर आएको धेरै भएको छैन । यो बेला राजा पृथ्बीनारायण शाह र महेन्द्र भइदिएको भए चीनसँग भारतसँग जस्तै सम्बन्ध राख्नुहुन्थ्यो होला । अहिले चीन विश्वसँग विकासको सहकार्यमा जोडिन आउँदा पनि यी नेताले यसलाई असफल पार्न खोज्नुले यी देशका लागि होइन आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्रै लाग्या छन् भन्ने देखाउँछ ।
पहिले भारत अहिले जस्तो सिधासिधी आउन सक्दैनथ्यो । म प्रधानमन्त्री हुँदा चिनियाँ सिमानामा रहेका भारतीय चेकपोष्ट मिलिटरी मिसन हटाउँदा भारतीय प्रम इन्दिरा गान्धी थिइन् । मैले तिनलाई हटाउन पत्र पठाएँ । उनीहरुले केही नभनी हटाए । त्यसको सट्टामा केही चाहन्थे भने पनि मसँग केही राख्न सकेनन् । किनकि मलाई यो देशको बिरुद्धमा जादैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा थियो । उनीहरु कसलाई आफ्नो हित अनुकुल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भित्र भित्रै जालो बुन्थे । तर आज त भारत खुलेआम नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आइरहेको छ । विश्व कहाँ पुगेको छ, मित्रवत ब्यावहार गर्नु पर्ने सट्टा नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । भूकम्पले हामीलाई थिचिरहेको बेला पनि नाकाबन्दी गर्न सक्ने कति नांगो हात हाल्यो ? नेता पनि त्यसको खुलेर बिरोध गर्न नसक्ने, कस्तो भयो हाम्रो देश ? ल हेर्नुस् त ! देशलाई दुख्दा नाकाबन्दी पनि भन्न नसक्ने ठूलो पार्टी रे हाम्रो । त्यस्तो पार्टी नेपालीको पार्टी हो ? त्यो नाकाबन्दीलाई त म दुब्र्यवहार भन्छु । भारत यसरी हस्तक्षेपकारी भएर आउनुमा यहाँका नेताको स्वार्थले धेरै काम गरेको छ ।
नेता भए पनि नेपालको हितमा चल्ने नेतालाई यहाँ गर्न दिंदैनन् । भारतले चलाएका नेताहरुले छिर्के हानीहाल्छन् । पछिल्लो समयमा केपी ओलीले जे गरे नि ! त्यो देशका लागि अति नै दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको काम गरे । उनले भारतले नाकाबन्दी लगाएर देशलाई कज्याउन लागेका बेला चीनतिर बाटो खोल्ने जे काम गरे, त्यसले देशलाई सयौं गुणा अघि लगाए । चाइनाको लागि पनि नेपाल स्टाटेजिकल्ली महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा केपी ओलीले देख्न सके ।